टिकाऊ प्याकेजि design डिजाइन मा कम्पनीहरु को लागी एक नयाँ दर्शन क्रिएटिव अनलाइन
टिकाऊ प्याकेजि design डिजाइनमा कम्पनीहरूका लागि नयाँ दर्शन
मेलिसा पेरोटा | | ग्राफिक डिजाइन, सामान्य, धेरै
प्याकेजिंगको लागि जोश र पारिस्थितिकीको प्रेमीको साथ डिजाइनरको रूपमा, म त्यस दिनको सपना देख्छु जब हाम्रो उत्पादन प्रक्रियाहरूले हामीलाई शून्य बेकारको स्तर लिन अनुमति दिन्छ। मेरो भविष्य दृष्टिकोण आशा छ कि हाम्रो सृजनात्मकता, कृत्रिम बुद्धिमत्तासँग हातले, चीजहरूको इन्टरनेट र सामग्रीको विज्ञानले हामीलाई उत्पादनहरू विकसित गर्न मद्दत गर्दछ जुनसँग परिपत्र जीवन चक्र वातावरणीय प्रभावको हाम्रो स्तर कम गर्न।
अधिक र अधिक डिजाइनरहरू परिचय गर्दै छन्aदिगो दृष्टिकोण उनीहरूको आदर्श र परियोजना विकास प्रक्रियामा। यद्यपि यो पर्याप्त छैन कि केही डिजाइनरहरू मात्र यो जिम्मेवारी ग्रहण गर्छन्। यस अर्थमा, यो आवश्यक छ कि दिगो दृष्टिकोण एक तथ्यको रूपमा मानिनु पर्छ, केही अप्ठ्यारो र एक विकल्प होईन। र यद्यपि यस्तो देखिन्छ कि आज हामी यस मुद्दालाई अधिक जिम्मेवारसँग व्यवहार गर्छौं; सत्य त्यो हो त्यहाँ दिगो प्याकेजि production उत्पादनप्रति धेरै कम प्रतिबद्धता छ.
दिगो प्याकेजि ofको लहर २००० मा "हनोवरमा ग्रहको अधिकारको घोषणा" संगै देखा पर्‍यो। यस अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीको बेला फर्म "विलियम म्याकडोना आर्किटेक्ट्स" का सदस्यहरूले दिगो डिजाइनका सिद्धान्तहरू पत्ता लगाउँथे। यस बिन्दुबाट, डिजाइन पेशेवरहरूले यस मुद्दालाई सम्बोधन गर्न बढ्दो दबाबमा आउन थाले।
अर्कोतर्फ, हालका वर्षहरूमा,aनयाँ पुस्ताहरूको हातमा नयाँ पर्यावरणीय जागरूकता। यी सामाजिक अभिनेताहरू एक पारिस्थितिक, सामाजिक र मानवीय प्रकृतिको कारणहरूको लागि पहिलेभन्दा बढी प्रतिबद्ध छन्। यस कारणका लागि, यदि हामी हाम्रो कम्पनी प्रतिस्पर्धी हुन र एक संतृप्त बजार मा दृश्यता प्राप्त गर्न चाहन्छौं; योसंग मिल्दोजुल्दो दृष्टिकोण अपनाउनु आवश्यक छ नयाँ उपभोक्ता मान.
1 टिकाऊ प्याकेजि is भनेको के हो?
2 के प्राप्त गरिएको छ?
2.1 पैसा बचत गर्नुहोस्
2.2 कम्पनी बढाउनुहोस्
2.3 स्थानीय उद्योगमा योगदान दिनुहोस्
टिकाऊ प्याकेजि is भनेको के हो?
सबै भन्दा पहिले यो "दिगो" वा "दिगो" परिभाषा बुझ्नु महत्त्वपूर्ण छ। जब एक सांस्कृतिक उत्पादन टिकाऊ हुन्छ विकासले पर्यावरणीय, सामाजिक र आर्थिक स्थायित्वको ग्यारेन्टी गर्न सक्दछ, समयको साथ चल्दै। यस तरिकाले, राम्रो, सेवा वा अनुभवको उत्पादन प्रक्रियाले उत्पादको उपयोगी जीवनको प्रत्येक परिदृश्यलाई ध्यानमा राख्नेछ, समान, व्यवहारयोग्य र व्यवहार्य बनाउने।
टिकाऊ प्याकेजि forको लागि गठबन्धनले यसलाई निम्न मार्फत परिभाषित गर्दछ सुरु:
Es लाभदायक, सुरक्षित र स्वस्थ व्यक्ति र समुदायको लागि तिनीहरूको सम्पूर्ण जीवन चक्र भरि।
भेट्छ प्रदर्शन र लागत मापदण्ड यो सम्बन्धित छ बजार को।
यो प्राप्त, निर्माण, ढुवानी र रिसाइकल गरिएको छ नवीकरणीय उर्जा प्रयोग गर्दै.
अनुकूलन गर्नुहोस् पुन: प्रयोज्य वा पुन: प्रयोग योग्य सामग्री र तिनीहरूलाई प्रयोग गर्दछ।
यो प्रयोग गरेर निर्मित छ सफा उत्पादन प्रविधिहरू र राम्रो अभ्यासहरूको नियमहरूको पालना गर्न।
बाट बनेको छ स्वस्थ सामग्री जीवन चक्र भर मा।
यो शारीरिक रूपमा डिजाइन गरिएको छ सामग्री र ऊर्जा को उपयोग अनुकूलन.
यो प्रभावी ढंगले औद्योगिक वा जैविक चक्रमा प्रयोग भई सकियो बन्द सर्किट.
के प्राप्त गरिएको छ?
व्यवसाय दृष्टिकोणबाट यो हरियो पहल गर्न कमिटको टाउको दुख्ने जस्तो लाग्न सक्छ। यो बुझिन्छ कि एसएमई मालिकहरूले सोच्न सक्छन् कि यी कार्यहरूले तिनीहरूको कम्पनीको लागि अनावश्यक लागत मात्र उत्पन्न गर्दछ। यद्यपि यी कम्पनीहरूसँग हुनु आवश्यक छ अधिक परिप्रेक्ष्यको साथ विश्वव्यापी दर्शन विकास गर्ने क्षमताले उनीहरूलाई उनीहरूको क्षितिज विस्तार गर्न अनुमति दिन्छ.
हामीले वर्तमान उपभोक्ताको मानमा परिवर्तनको बारेमा अघि उल्लेख गरेका कुरामा फर्कदै। यदि कम्पनीहरूको मुख्य कार्यका रूपमा उनीहरूका उपभोक्ताहरूको सन्तुष्टि छ; त्यसोभए, आफ्नै हितमा हो कि उनीहरूले उनीहरूको मानहरू उनीहरूको साथ संरेखित गर्न चाहन्छन्। यस अर्थमा, तिनीहरूले गर्न सक्छन् दिगो विकासलाई प्रतिस्पर्धी रणनीतिको रूपमा प्रयोग गर्नुहोस्। यस तरिकाबाट तिनीहरू आफूलाई आफूहरू यस ब्रान्डबाट भिन्न गर्न सक्नेछन् जुन यस स्रोतको शोषण गर्दैनन्।
पैसा बचत गर्नुहोस्
यद्यपि यो जस्तो लाग्न सक्छ, ईकोलजिकल प्याकेजि design डिजाइन केवल यसले कम प्याकेजि and र प्याकेजि costs लागतहरू पनि मद्दत गर्न सक्छ; तर पनि उही उत्पादनहरूको उत्पादन लागतमा कमी गर्न। कुञ्जी कम्पनीको अन्य क्षेत्रहरूसँग ट्रान्भर्सली काम गर्न सक्षम डिजाइन विभाग हुनुपर्दछ। यस तरीकाले, थप रचनात्मक दृष्टिकोणहरू गर्न सकिन्छ जुन उत्पादन प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा प्रारम्भिक चरणलाई ध्यानमा राख्दछ।
Si कम्पनी को प्रत्येक क्षेत्र को सक्रिय रूप मा निर्माण मा संलग्न छ वा बरु उत्पादको सह-निर्माण, यो तिनीहरू पछिको निर्णयहरूको व्यवस्था गर्न धेरै सजिलो हुन्छ। तर सबै भन्दा माथि, यसले एक व्यापक दृष्टिकोणको साथ उत्पादनहरू सिर्जना गरेर अपरेटिंग, सामग्री र समय लागत कम गर्न मद्दत गर्दछ।
उदाहरणका लागि, उत्पादको अवधारणाबाट प्याकेजि designer डिजाइनर समावेश गर्नुहोस् यसले तिनीहरूलाई राम्रो प्याकेजि visualको कल्पना गर्न मद्दत गर्दछ जसले कागजको प्रयोगको साथ वितरण गर्दछ र कन्टेनरलाई क्यूबको रूपमा प्रस्तुत गर्दछ। यो लेबल, र रसद भण्डारण ठाउँ अनुकूलन द्वारा वितरण द्वारा सामग्री बचत हुनेछ।
एक अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन परामर्श फर्म नीलसेनले गरेको चार मध्ये तीन Millennials स्थिरता मानहरू देखाउँदछ कि एक उत्पादन को लागी अधिक तिर्न तयार छन्। जे भएमा सबैभन्दा आश्चर्यजनक कुरा भनेको जेडले जेड, १ 15-२० उमेरका व्यक्तिले उत्पादन गरेको थियो जुन २०१ 20 मा 55 2014% बाट बढेर २०१ 72 मा %२% पुगेको थियो। अर्कोतर्फ, अध्ययनले गरेको एउटा सर्वेक्षण कोन संचार २०१ 2015 मा यो पत्ता लाग्यो कि of 84% उपभोक्ता जिम्मेवार उत्पादनहरु खोज्छन्।
यी नयाँ सर्तहरूको सामना गर्नुपर्‍यो, दिगो प्याकेजि ofको प्रयोगले कम्पनीहरूको ग्राहकलाई विस्तार गर्न र विस्तार गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ। नयाँ उपयोगकर्ताहरु लाई अधिक आकर्षक बनाउन को लागी तपाइँको उत्पाद पोर्टफोलियो खण्ड गर्न सक्छन्। वास्तविकता यो छ कि यदि हामी प्रतिस्पर्धी रहन चाहन्छौं भने हामीले हाम्रो उपभोक्ताहरूको साथ परिवर्तन गर्न हाम्रा मानहरू आवश्यक छ।
स्थानीय उद्योगमा योगदान दिनुहोस्
सस्टेनेबल प्याकेजि reachलाई सामाजिक पहुँच पुर्‍याउन स्थानीय रूपमा खटाइएको सामग्रीको अधिग्रहण पनि आवश्यक पर्दछ। यसरी, स्थानीय र क्षेत्रीय उत्पादन को एक ड्राइभर को रूप मा सेवा गर्दछ। यसको मतलब यो छ कि कम्पनीहरू जो स्थायी रूपमा काम गर्दछन्, पूर्वनिर्धारित रूपमा, आफ्नो तत्कालको समुदायबाट उत्पादनहरू प्राप्त गर्न उन्मुख हुनेछन्। यस तरिकाले, विभिन्न कम्पनीहरू तिनीहरू एक अर्कालाई सहयोग गरी स्थानीय अर्थव्यवस्थाको सुधारमा योगदान पुर्‍याउँछन्।
अर्को तर्फ, किलोमिटर ० उत्पादनहरूको बिक्री एक ठूलो प्रतिस्पर्धी फाइदा हो, किनकि यसले सामाजिक सचेत जनतालाई आकर्षित गर्दछ, लागत कम गर्ने र रसदको कारण वातावरणीय प्रभाव कम गर्ने बाहेक।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » ग्राफिक डिजाइन » टिकाऊ प्याकेजि design डिजाइनमा कम्पनीहरूका लागि नयाँ दर्शन
ऑस्कर मग्दालेना लाभेन्डेरा भन्यो
ऑस्कर मग्दालेना लाभेन्डिरालाई जवाफ दिनुहोस्
लाइट फोन २: एन्टी-स्मार्टफोनको नयाँ संस्करण
शहरी स्टिकरहरू भित्तिचित्र चित्रकलाको वैकल्पिक तरिका